Bentley waxay ka furtay qaybaha tartanka ardayda - Geofumadas
Bentley waxay tartameysaa ardayda
Sebtember, 2008 Microstation-Bentley
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqay in uu furay category abaalmarinta ardayda loo tixgalin doonaa bixinta NOQON Awards 2009 la-marinno in u tagto $ 1,000 mid kasta oo ka mid ah shan ka qaybgalayaasha qaybaha fursadaha software dheeraad ah si loogu isticmaalo waxbarasho ee machadka qaybgale.
Jaamacadaha iyo kulliyadaha farsamada Waxay soo bandhigi karaan mashaariicda mid ka mid ah saddexdan qaybood:
1. Naqshad dhisme
2. Isticmaalka naqshadeynta Qeybaha Guud
Mid kasta oo ka mid ah saddexdan qeybood ee ardaydu waa inay muujiyaan waxa dhibaatada lagu xalinayo iyo xalka ay isticmaalayaan Codsiyada Bentley.
Ardayda ee Dugsiga Sare waxay ka qaybqaadan karaan naqshadeynta xarumaha isboortiga iyagoo leh aragtida mustaqbalka iyadoo la adeegsanayo Microstation PowerDraft XM. Magaca qaybta ayaa ku wareegsan halkaas ...
4. Naqshadeynta xarumaha isboortiga mustaqbalka
Arday kasta oo kale ama macallin ayaa ka qaybgeli kara qaybta shanaad ee u furan dhammaan dadweynaha ee jawiga tacliinta:
5. Madadaallada iyo bandhigida fanka oo lacag la'aan ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad codsan kartaa cinwaankan: www.bentley.com/AcademicBEAwards, taariikhda xiritaanka mashaariicdu waa 20 Febraayo 2009.
Post Previous«Previous Isku xidhka laynka leh maadooyinka Microstation
Post Next Qandho qaniinyo tallaabooyinka 6Next »